Okwu Mmalite nke ialghọta ihu na Igwe Igwe Igwe - OMG Solutions
Ihu ihu bụ ngwa sọftụwia biometric nke nwere ike ịmata ma ọ bụ nyochaa mmadụ iche site na iji atụnyere na nyocha usoro dabere na ihu ihu mmadụ. A na-ejikarị njirimara ihu maka ebumnuche nchekwa, mana ọ na-enye aka maka ịchọta ndị na-efu efu. N’ezie, ihu n ’ihu ihu anatala nnukwu elebara anya dịka ọ nwere ikike maka ọtụtụ ngwa metụtara ndị mmanye iwu yana ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Igwefoto nche ihu na-eche ihu nwere ike iburu ihu ndị mmadụ nwere mmasị, netwọsụ nke ndị otu, ndị omekome na ndị a na-enyo enyo enyo. Ngwá ọrụ ahụ na-eme ka ndị nwere azụmaahịa dọọ aka na ntị mgbe ndị anaghị abịa erughi ihe ha nwere.
Olee otú ialmata ihu gị si arụ ọrụ
N'ime nchegbu gbasara nzuzo na izi ezi, ọ dị mkpa ịghọta etu ihu ihu si arụ ọrụ. Ihu ihu na-adabere n'ọtụtụ teknụzụ iji rụọ ọrụ: Sistemụ eserese onyoonyo (igwefoto ma ọ bụ onyunyo vidiyo), ọgụgụ isi na mmụta igwe. Ihe ngosi ihu ihu site na foto ma obu vidiyo ma gbanwee ha n'ime ihe omimi nke dijitalụ. Ọ na - atụnyere mbinye aka dijitalụ a na nchekwa data nke ihu mara iji chọta egwuregwu.
E nwere ụzọ ihe anọ dị mkpa iji mata ihu gị:
Usoro ahụ na-ese foto nke ihu gị ka ị na-aga. Nke a nwere ike ịbụ foto vidiyo ma ọ bụ foto.
Akụrụngwa ihu dị na-agụ ọdịdị ihu gị. Ọ na-eleba anya dị ka anya dị n’etiti anya gị, n’egedege ihu ya na elu gị, na akara ngosipụta ihu gị iji mepụta akara dijitalụ nke ihu gị.
A ga-eji nyocha nke ihu gị, usoro mgbakọ na mwepụ nke ndị ọzọ na zeros pụrụ iche, atụnyere data nke ihu ndị amaara.
Usoro ahụ na-ekpebi njirimara gị.
Ebee ga-eji njirimara ihu?
Portsgbọ elu ụgbọelu bụ otu n'ime ebe ndị mmadụ jupụtara. Ọnụ ọgụgụ mmadụ na-aba ụba na-amụba ohere nke nsogbu nchebe. Agbanyeghị na ọdụ ụgbọ elu nwere ngwaọrụ nleba anya, igwefoto CCTV, na usoro nchekwa ndị ọzọ, a ka nwere ebe mgbapụ nchekwa dị. Site na ntinye nke teknụzụ nke ihu ọma, enwere ike ịkwalite nchekwa ọdụ ụgbọ elu. A na-etinye kamera n'ime ụgbọ ala obodo, bọs ụlọ akwụkwọ, bọs ọha, ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, na ụgbọ oloko iji nyocha ihu ndị njem ma were ha tụnyere nchekwa data. Ọ bụrụ n ’ọnụnọ nke onye achọrọ, ọ ga-eme ka ọkwọ ụgbọ ala ahụ na ndị ikike metụtara ya nọrọ.
Ebubere ihu ihu na mbụ maka njirimara njirimara na njikwa ịnweta, iji rụọ ọrụ n'ọnọdụ a na-achịkwa iji gosi na mmadụ bụ onye ha kwuru na ọ bụ. Ugbu a igwefoto na-enyocha igwe mmadụ, na-atule ihu niile na-elele na ndepụta elekere.
Ọtụtụ ndị ọrụ mmanye iwu na-eji njirimara ihu iji nyochaa vidiyo vidiyo edekọ, ịchekwa oge na mbọ, ọ na-esiri m ike iji ya n'oge, na ụwa n'ezie. Mgbakọ na mwepụ nke ịlele onye ọ bụla na-agafe agafe na ohere ọha na eze juputara na obere ndepụta elele na-eme ka njirimara ihu na njedebe ya. Naanị "Mini WIFI / GPS / 3G / 4G Igwe Igwe Na - acha Anya - Nchọpụta ihu (BWC058-4G)”Nwere ike ịnagide ya.
N’adịghị ka nnabata ihu, ahụ mmadụ ahụburu ka ikuchi mmadụ. Ngwaọrụ vidiyo ndị a na-eyi uwe ojii na-eyi uwe ndị uwe ojii gburugburu ụwa, na-enye njikwa akaebe, nchekwa ndị ọrụ, na mmesi obi ike nke ọha. Bodycams na-edekọ vidiyo maka ịdụnye n'ime anụ ahụ Somefọdụ bodycams na-enyocha vidiyo vidiyo azụghachi ụlọ. Ndị ọzọ na-ejikọ aka na ngwa agha iji kpalite ndekọ vidiyo na-akpaghị aka. Dika igwe eji ekwu okwu, usoro ohuu nke ohuu nke n'ebere igwe agha bu ihe eweputara ike. Nke a pụtara na teknụzụ abụọ ahụ ga-ezukọ. Ihu iru n’anya n’arụ bụ ihe pụtara ìhè na-esote. Ike ndị ọrụ nwere ndepụta nche nke ndị omempụ chọrọ, ndị nwere mmasị, ụmụaka na-efu, ndị okenye na-enweghị nsogbu.
Iji ụdị ihu mmadụ eme ihe na-enyekwa ihe nchebe pụọ na ebubo nke agbụrụ agbụrụ. Enwere ike ịtọbe iwu iji gbochie ndị ọrụ na-achọ ndị amabeghị ihu ha, ọbụlagodi mgbe a kwụsịrị. N'ebe ebubo ebubo nkwụsị na ịchọpụta mpụ dị ala na mpaghara dị iche iche, njirimara ihu na bodycams na-enye nguzozi. Ọ bụ ụdị nchekwa a ga - enyere aka ịnabata nkuchi sara mbara.
Ihu ihu dị na akpukpo ahụ ga-enye nkwenye nke abụọ maka ọkụ sitere na ụgbọ ala ndị na-ekpuchido na igwefoto CCTV. Otu egwuregwu bọọlụ na-abịakwute onye ahụ ma jiri kamera na-enyocha nke abụọ wee si na ndepụta otu elekere na - agba ọsọ. Naanị ma ọ bụrụ na enwere egwuregwu ọzọ bụ ihe ọ bụla e wepụrụ. N’onwe ya, nke a bụ ihe nchekwa nke ukwuu pụọ n’aka ihe a sị na ọ bụ ihe ziri ezi. Ọ na-enyekwa mmadụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya tupu e mee mkpebi ikpeazụ na njide.
Ọgbọ mbụ nke kamera ahụ na-arụ ọrụ taa lekwasịrị anya na ịdekọ vidiyo maka usoro njikwa ihe ngosi. Ugbu a, Bodycam na-agbanwe elekwasị anya na ntanetị vidio, ihu ihu, na ngwaọrụ Edge-AI. Ọgbọ a nke IoT (ịntanetị nke ihe) bodycams ga-esonyere ọtụtụ ijeri ngwaọrụ IoT ndị ọzọ ga-etinye na 4G na 5G netwọk na afọ ndị na-abịanụ. Ezubere ya ịbụ netwọkụ, ịkekọrịta data, iji kewaa nhazi site na nsọtụ ruo na etiti, ngwaọrụ ndị a ga-agbanwe site na 'ọ bụrụ na' ndekọ vidiyo na ngwa ọrụ ndị uwe ojii dị mkpa.
Ya mere, dịka ndị uwe ojii si ele ihe anya, Afọ ndị na-abịanụ ga-aka akara dị ka oge ntụgharị maka ihu ihu. Ule ga-abanye na nhazi. Mgbasa ozi ga-arụpụta ihe. A ga-emeri arụmụka ndị ahụ. Imirikiti ọha na eze, n'ikpeazụ, ga-ahọrọ maka nchekwa na nchekwa onwe onye karịa nzuzo nzuzo. Mgbe ọtụtụ oku chọrọ maka mgbochi na iwu, nyocha e bipụtara tupu ọnwa ụfọdụ achọpụta na ọ bụ naanị 18% nke ndị America kwenyere na ihu ihu kwesịrị ịgbachi oke na nchekwa ọha. Nke a bụkwa ebe ozu ga-esi bata na nke ha. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịzụ ndị uweojii anyị ka ha mata onye ọ bụla amaara amamịghe, onye ọ bụla nwere mmasị na-enweghị mmasị, okenye ọ bụla na-adịghị ike ma ọ bụ nwatakịrị na-efu, ruo ogo 99% ma ọ bụ karịa nke ziri ezi.
Uru nke Ngosiputa N’iru
Mmụba na-abawanye: Otu n'ime uru kasịnụ nke teknụzụ ihu ọma bụ na ọ na-eme ka nchekwa na nchekwa dịkwuo mma. Site na ụlọ ọrụ gọọmentị ruo ojiji nkeonwe, a na-achọwanye ụba maka nchekwa na sistemụ na-aga n'ihu. Organihazi nwere ike ịchọpụta ma sochie onye ọ bụla batara n'obere ụlọ, ma nwee ike tigharị ndị ọbịa a na-anaghị anabata. O nwere ike inye aka nke ukwuu ma a bịa n’ịchọ ndị na-eyi ọha egwu nwere ike ịdapụta. Na mgbakwunye, enweghị isi, baajị, ma ọ bụ paswọọdụ enwere ike izuru ma ọ bụ tufuo.
Ngwa ngwa na izi ezi: Site n’inweta ịrị elu na-abawanye n’ike na ọnụ ọgụgụ cyberattacks, inwe teknụzụ ngwa ngwa na nke ziri ezi bụ isi. Teknụzụ ndị na-ahụ maka ihu na-enye nkwenye dị mma, ngwa ngwa, na nke ziri ezi. Agbanyeghị na ọ ga - ekwe omume, ịhapụ nzuzu teknụzụ ihu dị, nke na - eme ka ọ baa uru na enyere aka gbochie aghụghọ.
Enweghị kọntaktị: A na-ahọrọ ihu dị mma karịa nyocha mkpịsị aka aka n'ihi usoro anaghị eso ya. Ndị mmadụ agaghị echegbu onwe ha maka ọghọm ọghọm ndị metụtara teknụzụ njirimara mkpịsị aka, dị ka nje ma ọ bụ akara.
Nweta Nghọta Ahu
Ego mmejuputa ego di elu: Ihu ihu chọrọ igwefoto di elu na akụrụngwa dị elu iji hụ na izizi yana ọsọ. Agbanyeghị, Nnyocha Ọzụ Ahịa na-ebu amụma na ọganihu nke teknụzụ nwere ike belata ọnụahịa nke sistemụ ihu ihu n'ọdịnihu.
Nchekwa Data: Ihe onyonyo na ihe omuma di elu achọrọ maka nnabata ihu weghara oke nchekwa. Ka usoro ihu ihe dị mma wee na-adị irè, ha na-ahazi ihe gbasara 10 ruo 25% nke vidiyo. Nke a na - eduga òtù dị iche iche iji ọtụtụ kọmputa hazie ihe niile ma mee ya ngwa ngwa.
Mgbanwe na Ngosipụta na Angle Igwefoto: Ngbanwe ọ bụla dị mkpa n'ọdịdị, gụnyere ntutu ihu na mgbanwe ibu, nwere ike tụfuo teknụzụ ahụ. N'ụdị oge ndị a, achọrọ ọhụụ. Akụkụ igwefoto nwekwara ike ibute okwu n'ihi na achọrọ ọtụtụ akụkụ iji mata ihu.
Ka ọ dị ugbu a, enweghị iwu na-ekwu okwu kpọmkwem na nhazi na nchịkwa nke igwefoto uwe ndị uwe ojii na-eyi. Iwu a doro anya na-egbuzi ọsọ ọsọ nke teknụzụ onyunyo dị ka igwe na-eyi ahụ. Ọnụnọ nke iwu kwesịrị ekwesị na-akpata ihe egwu na nzuzo nke ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịbanye n'ihe egwu n'ihi nnabata nke teknụzụ ọhụụ.
Ihu ihu bụ teknụzụ dị ike mana ọ ga-eji ya mee ihe n'ụzọ amamihe. N'otu aka, ọ na-ewetara ụlọ ọrụ na ndị ọrụ njedebe uru dị ukwuu, na-enyere ha aka ịkwalite nchekwa ha na ịchụso ndị trespassers. N’aka nke ọzọ, enwere ike iji ya mee ihe n’ụzọ na-ezighị ezi ma baara ya uru ụfọdụ. Ọ ga-ewe afọ 5 dịkarịa ala maka ihu ihu ịbanye na ozi kwekọrọ n'ihe ndị ruuru mmadụ na nzuzo mmadụ.
Ejikọtara kamera ahụ nwere ọfụma na ihu ihu ọfụma iji belata nsonaazụ na-adịghị mma na ihe ize ndụ na nzuzo, ekwesịrị ịdebe iwu kwesịrị ekwesị nke na-ekwu okwu ozugbo na ngwaọrụ ndị a. Enwere ohere maka igwefoto ahụ na-eyi bụrụ ngwa bara uru iji nweta mmezi nke ọma; agbanyeghị, nke a ga - ekwe omume ma ọ bụrụ na ụkpụrụ nzuzo nzuzo dabara adaba n'iwu.
Anon., Nd Nkwupụta Nchebe Worldwa. [Na ntanetị]
E Nwere na: http://www.worldsecurity-index.com/shareDir/documents/15508405770.pdf
Bud, TK, nd BWVSG. [Na ntanetị]
E Nwere na: http://www.bwvsg.com/resources/procedures-and-guidelines/
DashMagazine, nd M. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://becominghuman.ai/the-threats-and-benefits-of-facial-recognition-what-should-we-know-17008f69ae74
Doffman, Z., [Online]
E Nwere na: https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/01/10/body-worn-2-0-how-iot-facial-recognition-is-set-to-change-frontline-policing/#4e0a5cad1ff3
Marr, B., nd Forbes. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/08/19/facial-recognition-technology-here-are-the-important-pros-and-cons/#28c79e8e14d1
Otu, RM, 2019. RTI. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.1rti.com/pros-cons-of-facial-recognition-technology/
Wendt, R., 30 juli 2019. Ahịa Ahịa & Ntinye. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.securitysales.com/news/facial-recognition-tech-scrutiny/
Nzuzo 7212 3 Echiche Taa